Ungazi njani ukuba i-iPhone yam isimahla | Iindaba zeGajethi
Ungazi njani ukuba i-iPhone yam isimahla
Sijongene nomzuzu obalulekileyo kwihlabathi lee-smartphones kwaye kukuba namhlanje akukho nto yenzekayo ukwenza ukuthengwa kwefowuni yomqhubi kuba kwimeko ye-Apple iPhones bonke bakhululekile kumzi-mveliso. Ngale ndlela sinokuthi yinto ebonakalayo ebesiyonwabele kangangexesha elithile kwaye namhlanje siza kubona ezinye iindlela zokwazi ngokwenene ukuba i-iPhone esiyithengayo isimahla.
Xa siza kuthenga i-iPhone yesibini nokuba isevenkileni okanye ngokuthe ngqo kumsebenzisi, into yokuqala ekufuneka siyicacisile ngowona mvelaphi weso sixhobo ukusukela, nangona iyinyani, eyona ngxaki inkulu esinokuba nayo ngezi zixhobo liyi lock nge iCloudUkwazi ukuba isimahla, umsebenzisi okanye into efanayo ayonzakalisi.
1 Yintoni iCloud uvimba kwaye kutheni kufuneka siphephe
2 Umahluko phakathi koMntu oMninimzi okhutshiweyo kunye nesixhobo esingakhutshwa
3 Jonga useto ukuba i-iPhone isimahla
4 Ngqo faka i-SIM esuka komnye umsebenzisi
5 Ndingenza ntoni xa ivinjiwe?
Yintoni iCloud uvimba kwaye kutheni kufuneka siphephe
Siza kuqala ukuthetha ngeengxaki esinokuba nazo ngesixhobo esitshixiwe yi-iCloud enokuthi ivela kwii-iPhones, ii-iPads, iiMacs, kunye neApple Watch. Olu lwazi lubaluleke kakhulu kuba luya kusivumela ukuba sisebenzise i-iPhone okanye sibe nephepha elincomekayo lasekhaya elixabiso liphezulu. Xa usebenze Fumana i-iPhone yam kwezi zixhobo, igcinwe ngokukhuselekileyo kwiiseva zika-Apple kwaye idityaniswa nesixhobo, ukusukela kuloo mzuzu ukuya phambili, igama eligqithisiweyo le-ID yakho ye-Apple okanye ikhowudi yesixhobo eyimfuneko komnye umntu anokuyisebenzisa kamva. isixhobo, cima umxholo, okanye wenze kusebenze.
Le yindlela ojonga ngayo ukuba isixhobo sinayo ukukhubazeka kwe-iCloud lock:
Vula isixhobo kunye nesilayidi ukuvula
Ukuba iKhowudi yokuTshixa ikhusi okanye iKhaya lasekhaya liyavela, umxholo wesixhobo awucinywanga. Buza nabani na othengise kuwe ukuba asule imixholo yesixhobo ngokupheleleyo Useto> Ngokubanzi> Cwangcisa kwakhona> Cima umxholo kunye noseto. Njengoko sisitsho, into ebalulekileyo kukuzigcina kude nezi zixhobo de umxholo wazo ucinywe kwaye singazisebenzisa.
Qalisa inkqubo yokuseta isixhobo
Ukuba ibuza i-ID ye-Apple kunye negama lokugqitha lomnini wangaphambili, kungenxa yokuba isixhobo sisaxhunyiwe kwiakhawunti yabo. Buyisela isixhobo kuye nakubani na othengise kuwe kwaye ubacele ukuba bafake ipassword. Nokuba umnini wangaphambili akekho, ungasusa isixhobo kwiakhawunti yakho ngokungena ungene icloud.com/find.
Inyathelo elibalulekileyo apha ayikokuthenga nayiphi na into esetyenzisiweyo ye-iPhone, i-iPad, okanye i-iPod de isuswe kwiakhawunti yomnini wangaphambili. Kule meko asiyi kuba nakho ukwenza nantoni na ukuba isixhobo sitshixiwe nge-iCloud ke nikela ingqalelo kule datha.
Umahluko phakathi koMntu oMninimzi okhutshiweyo kunye nesixhobo esingakhutshwa
Umahluko ophambili phakathi kwezi kukuba kwizixhobo zasimahla siya kuba nakho Sebenzisa iSIM khadi yakhe nawuphi na umsebenzisi kwi-iPhone, nokuba yintoni. Xa isixhobo singakhange sikhululwe ngumsebenzisi, ezi azinakusetyenziswa nabanye abasebenzisi, ke ukuba zivela eMovistar zinokusetyenziswa kuphela neMovistar, ukuba yiOrange, emva koko ineorenji njalo-njalo nabo bonke.
Singatsho ukuba le yinto ingaqhelekanga ngoku kwaye uninzi lwee-smartphones zikhutshwa kumzi-mveliso, ke bonke abaqhubi eSpain bathengisa izixhobo zasimahla. Ngale ndlela xa uthenga i-iPhone singayisebenzisa ngayo nayiphi na into esebenza elizweni ngaphandle kwengxaki.
Jonga useto ukuba i-iPhone isimahla
Enye yeendlela ezizezona zingcono zokuqinisekisa ukuba i-iPhone yethu ayisebenzi ngaphandle kwesixhobo ngokuthe ngqo kwisixhobo uqobo kwaye akukho miqondiso ithe ngqo ebonisa ukuba ngumqhubi okanye enye, njengoko kwenzekile ngaphambili ukuba ezinye iimodeli (hayi i-iPhone) zazinxiba umaleko we ulwenziwo lomsebenzisi oluzithengisayoUkongeza, ezinye iimodeli zinegama lomsebenzisi eliprintwe kwisixhobo ngokwaso.
Kwimeko ye-iPhone, eyona ndlela ilula njengoko sisitsho kukungena ngokuthe ngqo kwiisetingi> idatha yedatha kwaye kweli candelo sifumana ukhetho Inethiwekhi yedatha yeselfowuni, oko kuthetha ukuba i-iPhone yethu isimahla. Ukuba olu khetho alubonakali kwizixhobo ze-iOS Kungenxa yokuba le iPhone iya kuvalwa ngumsebenzisi.
Ngqo faka i-SIM esuka komnye umsebenzisi
Ngapha koko, enye yezona ndlela zibalaseleyo zokujonga ukuba i-iPhone yethu isimahla kukufikelela ngqo kwisixhobo kunye nokubeka iSIM khadi komnye umsebenzisi. linda oku ngokuthe ngqo ukuze kusebenze. Oku kunokubonakala ngathi yinto elula kwaye ethe ngqo iyanzima xa sithenga into kwi-Intanethi, kodwa ngokungathandabuzekiyo lolona vavanyo sinokulwenza ukukhangela ukuba ngaba i-iPhone esiza kuyifumana ikhululekile ukuba isebenze okanye hayi. Senza umnxeba kunye ne-voila, ukuba iyasebenza, isimahla.
Izivumelwano eziqhelekileyo zabantu abaqhelekileyo azinazithintelo ngokwemiqathango yokuba "ziboshwe" kumqhubi, sinokufumana iimeko ezithile kwimigca yenkampani kodwa kunqabile kwaye kunqabile kwi-iPhone kuba okwangoku zonke azinantsusa. Oku akuthethi ukuba ziyahambelana nabo bonke abaqhubi kwaye ii-frequencies apho ezinye zazo zisebenza khona azihambelani kwamanye amazwe, kodwa kwiimeko ezininzi asizukuba nengxaki ekusebenzeni kwazo kwaye ngaphantsi ukuba sithenga ngokuthe ngqo kwilizwe elithile uManyano lweYurophu.
Ndingenza ntoni xa ivinjiwe?
Ukuba bekunjalo ukuba sele siyithengile isixhobo kwaye ivaliwe kumsebenzisi, ungasoloko ubuza umsebenzisi ukuba uthenge i-iPhone ukubiza umsebenzisi ngokuthe ngqo kwaye ukhulule isixhobo (Le nto ibiyenziwe kungekudala) kuba abayi kukubiza mali. Kule meko, abaqhubi abayichasanga kwaye ukuba ngasizathu sithile awukwazi ukuvula i-iPhone kukho ezinye iiwebhusayithi zomntu wesithathu ezinje GqirhaSim ezenza ukukhutshwa kwaso nasiphi na isixhobo esifuna ukusikhulula.
Ngamafutshane, into ekufuneka siyicacisile kukuba uninzi lwezixhobo ze-iPhone esinokuzifumana kule mihla ayinasiseko kwimvelaphi kwaye ngekhe sibe nangxaki ukuyisebenzisa kunye nomsebenzisi wethu. Kwezinye ii-smartphones ezikwimakethi, zininzi okanye zincinci ezifanayo ezenzekayo, inqabile imodeli "ebotshelelwe" kumqhubi othile kwaye xa sifaka iSIM yethu okanye eyomnye umsebenzisi abanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungazi njani ukuba i-iPhone yam isimahla
I-Energy Sistem iveza ngokusemthethweni uluhlu lwayo olutsha lwezithethi ezikrelekrele kunye ne-Alexa